ဝါးခယ်မ : April 2019
ညအိပ်စဉ် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့ခြင်း နှင့် အသက်ရှူရပ်ခြင်း အသေးစိတ်
အိပ်စက်ခြင်းသည် လူတစ်ယောက်အတွက် အလွန်အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ကောင်းမွန်စွာ အိပ်စက်ခြင်းသည် ကျန်းမာခြင်းအတွက် အလွန်အရေးပါပါသည်။ ဦးနှောက်၊ နှလုံး၊ ကြွက်သား၊ အသည်း၊ အဆုတ် အစ ရှိသော ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း အတော်များများအား အနားပေးပြီး ပျက်စီးသည့် Cells ဆဲလ်များအား ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ နောက်တစ်နေ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း အစ ရှိသည့် အရေးပါသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများသည် အိပ်စက်ခြင်း အချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကောင်းမွန်စွာ အိပ်ပျော်မှ ဦးနှောက် ဆဲလ်များ ကောင်းမွန်စွာ အနားရပြီး နောက်တစ်နေ့ ထလာသည့် အခါတွင် အားအင် အပြည့်ဖြင့် လန်းလန်းဆန်းဆန်း နိုးထလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ရက်အိပ်ရေးပျက်လျှင်ပင် ခေါင်းမကြည်ခြင်း၊ ခေါင်းအုံခြင်း၊ စိတ်အာရုံ စူးစိုက်နိုင်မှု အားနည်းခြင်းများဖြစ်ပေါ် ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အိပ်နေစဉ် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့ ခြင်းကြောင့် ကောင်းမွန်စွာ အိပ်မပျော်ပါက နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ အနေဖြင့် နှလုံး ရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ လေဖြတ်ရောဂါ အစရှိသော ရောဂါများအား ပိုမိုဖြစ်စေပြီး ရောဂါရှိနေပါက လည်း ပို၍ ဆိုးရွားစေပါသည်။
ဟောက်ခြင်းသည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ကျဉ်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လည်ချောင်းရှိကြွက်သားများသည် ညဘက်အိပ်ပျော်သွားသောအခါ relax state ဟုခေါ်သောအကြောဖြေလျော့သကဲ့သို့ ပျော့သွားသည့် အဆင့်သို့ရောက်ရှိသွားသောအခါတွင် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ကျဉ်းသွားသည့် အတွက် ဟောက်သည့် အသံစတင်ထွက်ပေါ်ပါသည်။ နောက်ပိုင်း ပို၍
အိပ်ပျော်သွားသောအခါတွင် ပို၍သိသာစွာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကျဉ်းပြီး ပိတ်သွားသလို ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်း၍ အသက်ရှူရပ်သွားခြင်းသည် အိပ်နေစဉ်တစ်နာရီတွင်း တွင် အကြိမ် ၃၀ ခန့်ထက်ပို၍ ပိတ်ဆို့နေလျှင် ဆိုးရွားသောအဆင့်သို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး သိသာထင်ရှားစွာ နောက်ဆက်တွဲပြသနာများကိုမလွဲမသွေခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသက်ပုံမှန်ရှူနေသော်လည်းအဆုတ်တွင်းလေများမ၀င်တော့ခြင်းကြောင့်လေထဲမှအောက်စီဂျင်များသွေးထဲ
သို့မရောက်သကဲ့သို့ ဦးနှောက်တွင်းသို့လည်းအောက်စီဂျင်လုံလောက်စွာမရတော့ပေ။ အသက်ရှူသည့်လေပြွန်သည်ပိတ်သွားသော်လည်းမိမိသည်အိပ်ပျော်နေသောကြောင့်မိမိ အောက်စီဂျင်မရခြင်းကိုမိမိကိုယ်တိုင်မသိရှိပေ။ အောက်စီဂျင်သည်ပုံမှန်အားဖြင့် သွေးထဲတွင် ၉၆ မှ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းတွင်ရှိရမည်ဖြစ်သော်လည်းလေပြွန်ပိတ်ဆို့သွားသည့်အခါတွင် ၈၀ အောက်ထိကျသွားတတ်ပါသည်။ သို့သော်ခန္ဓာကိုယ်၏ အလိုအလျောက်တုန့်ပြန်အာရုံကြောစနစ်များမှသိရှိပြီးလေပြွန်များပွင့်ရန်ကြိုးစားပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းတွင် မိမိသည်ဟောက်နေရာမှ အသက်ရှူလုံးဝရပ်သွားခြင်းဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ထို့နောက် မိမိ၏ အလိုအလျောက်တုန့်ပြန်စနစ်များမှလှုံ့ဆော်မှုများကြောင့် ပြန်လည်နိုးထလာပြီးလေပြွန်ပြန်ပွင့်ပြီးအသက်ပြန်ရှူပါသည်။ ထိုသို့ပြန်လည် နှိုးထဖို့ အတွက် ဦးနှောက်မှ ပြန်လည် နိုးထပြီး အသက်ရှူရသည့် အတွက် တစ်ညလုံး ဦးနှောက်အနားမရ ဖြစ်နေပါသည်။
ထို့ကြောင့် တစ်ညလုံးကောင်းစွာအိပ်ရေးမ၀ခြင်းဖြစ်နေသည်ကတစ်ကြောင်း၊ အောက်စီဂျင်ကောင်းစွာမရရှိခြင်းကြောင့် ဦးနှောက်တွင်းကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်များစုပုံနေသည်ကတစ်ကြောင်းတို့ကြောင့်မနက်မိုးလင်းလင်းချင်းတွင် အိပ်ရေးမ၀ဘဲ ခေါင်းအုံနေခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊မကြည်လင်ခြင်း၊ မလန်းဆန်းခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ထိုသို့သာမက နေ့လည်ဘက်တွင် ကားမောင်းနေရင်းဖြစ်စေ၊ တီဗီကြည့်နေရင်းဖြစ်စေအိပ်ငိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။
ထိုသို့ လက်တွေ့တွင် အိပ်ရေးမ၀ခြင်းသာမက မိမိကိုယ်တိုင်မသိနိုင်သောခန္ဓာကိုယ်တွင်းဇီဝပြောင်းလဲမှုများလည်းဖြစ်ပေါ်ပြီး သွေးပေါင်ချိန်တက်လာခြင်း၊ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်းတို့သည် အန္တရာယ်ရှိသော နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပါသည်။
OSA ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်စေသော နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ
၁။ အိပ်ရေးမ၀သည့်အတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်တိုစိတ်ညစ်ညူးခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း
၇။ အိပ်ငိုက်ခြင်းကြောင့်ယာဉ်တိုက်မှုများဖြစ်နိုင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆများဖြစ်နိုင်ခြင်း
၈။ အာရုံစူးစိုက်မှုလျော့နည်းခြင်း၊ မှတ်ဥာဏ်အားနည်းခြင်း
OSA သည် အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများသောကြောင့် လူတိုင်းအထူး သတိပြုသင့်သော ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဘယ်လို လူတွေမှာဖြစ်များလည်း ဆိုတော့ မိမိနှင့် အတူအိပ်နေသော မိသားစုဝင်မှ မိမိအိပ်ပျော်နေစဉ် ဟောက်ပြီး အသက်ရှူရပ်ခြင်း ရှိသည်ဟုပြောလျှင် OSA ရှိရန် သေချာ သလောက်ရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော လူများတွင် OSA ပို၍ အဖြစ်များပါသည်။
၁။ အ၀လွန်သူများ (အထူးသဖြင့် အိပ်နေစဉ်တွင် ဟောက်သော သူများတွင် အသက်ရှူရပ်ခြင်း ပို၍ ဖြစ်စေပါသည်။)
၄။ သက်ကြီးပိုင်းတွင်အဖြစ်များသော်လည်း မေးရိုးတိုသူများ၊ လည်ပင်းတိုသူများ၊(အမျိုးသားများတွင်လည်ပင်းအရွယ် ၁၇ လက်မနှင့်အထက်ရှိခြင်း၊ အမျိုးသမီးများတွင် လည်ပင်းအရွယ် ၁၆ လက်မနှင့်အထက်ရှိခြင်း)
၁။ လည်ပင်းနားရှိကြွက်သားများအားနည်းခြင်း( အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ကြွက်သားများ၏သန်စွမ်းမှုသည်အရင်လောက်မကောင်းတော့ဘဲလျော့ရဲရဲဖြစ်လာခြင်းကြောင့် အသက်ကြီးသူများတွင် ညဘက်ဟောက်ခြင်းပို၍ဖြစ်ရပါသည်။)
၂။အသက်ရှူလမ်းကြောင်းအနီးတွင် တစ်ရှူးများများပြားလာခြင်း( ၀သောသူများတွင် အဆီတစ်ရှူးများစုပုံခြင်းကြောင့်လည်ပင်းတွင် နေရာကျပ်ပြီးအသက်ရှူလေပြွန်များပိတ်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်လူငယ်များပင်ဖြစ်လင့်ကစား ၀သောသူများသည် ပိန်သောသူများထက်ပို၍ ဟောက်တတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
မိသားစုဝင်မှ လည်း ဟောက်၍ အသက်ရှူရပ်ခြင်းမျိုး ရှိသည် ဟုပြောလျှင် သော်လည်း ကောင်း၊ OSA အဖြစ်များသော အုပ်စုတွင် ပါလေ့ရှိသော သူများအနေဖြင့် မိမိအသက်ရှူ ရပ်ခြင်း မည်မျှ ရှိခြင်းအား အသေးစိတ် တိတိကျကျ တိုင်းတာနိုင်ရန် အတွက် Sleep Study ပြုလုပ်၍ ရနိုင်ပါသည်။ sleep study သည် အိပ်ပျော်နေချိန်အတွင်းမိမိ၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ အောက်စီဂျင်၊ အသက်ရှူနှုန်း နှင့် အသက်ရှူရပ်ခြင်းရှိမရှိ၊ အသက်ရှူရပ်သွားပါက အမျိုးအစားနှင့် စက္ကန့် မည်မျှကြာအောင် ရပ်သွားသလဲ၊ ခန္ဓာကိုယ် ပုံစံအနေအထား၊ ရင်ဘတ်နှင့်ဝမ်းဗိုက်၏လှုပ်ရှားမှုတို့ကို ကြိုးများတပ်၍ စမ်းသပ်လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့တပ်ခြင်းဖြင့်
CSA(central sleep apnoea), AHI(Apnoea Hypnoea index), OH စသည့်အချက်အလက်များစွာသိရှိနိုင်ပါသည်။
AHI (Apnoea Hypnoea Index) သည် OSA ရှိသော လူနာအား ကုသမှု ပေးမပေး ဆုံးဖြတ်ပေးသော အရေးကြီးသည့် Index တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော Sleep Study ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် AHI မည်မျှရှိလဲဆိုတာ တိတိကျကျ အဖြေထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။
AHI <5 - ပုံမှန်
AHI5မှ 10 ကြားရှိလျှင် - mild (အပျော့စား အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်း)
AHI 15မှ30ကြားရှိလျှင် -moderate (အလယ်အလတ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်း)
AHI 30 ကျော်လျှင် - severe (အပြင်းစား အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်း)
ထို ရရှိလာသည့် AHI အပေါ်မူတည်ပြီး ကုသမှု ပေးခြင်းအား ဆုံးဖြတ်ပါသည်။
အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ဆိုးရွားစွာ ပိတ်နေပြီး အသက်ရှူရပ်နေသော လူနာများတွင် အသက်ရှူစက်(CPAP)တပ်၍ အိပ်စက်ခြင်းဖြင့် ကုသမှု ခံယူနိုင်ပါသည်။ အသက်ရှူရပ်သွားသည့် အချိန်တွင် စက်မှ အလိုအလျောက်သိရှိပြီး လူနာ အသက်ရှူရပ်ပြီ ဆိုသည်နှင့် ချက်ချင်း စက်မှ Pressure ဖြင့် လူနာလေပြွန်အတွင်း သို့ မှုတ်သွင်းပြီး အသက်ရှူစေသဖြင့် လူနာ၏ လေပြွန်မှာ ပြန်လည်ပွင့်သွားပြီး
ဟောက်ခြင်း၊ အသက်ရှူရပ်ခြင်းများ မဖြစ်စေတော့ပါ။
Sleep study လုပ်ခြင်းဖြင့် မိမိ အိပ်နေသော အနေအထားကိုပါသိရှိနိုင်သောကြောင့် အနေအထားကြောင့်ဖြစ်သောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်းများပါသိရှိနိုင်ပြီးအချို့သောလူများတွင် မိမိအိပ်စက်မှုပုံစံကိုပြုပြင်ရန်လိုအပ်ခြင်း Positional Therapy အား ခံယူနိုင်သည်အထိ Sleep Study မှ တိတိကျကျ သိရှိနိုင်ပါသည်။
OSA အား ကုသသော Definitive Treatment သည် CPAP စက်တပ်အိပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါတွင် ပို၍ ခေတ်မီလာသော အခါ Auto CPAP များပေါ်လာပြီး လူနာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်သည့် အခါတွင် စက်မှ အလိုအလျောက် ပိတ်ဆို့ မှ ပမာဏအား တိုင်းတာ၍ လိုအပ်သော Pressure အား ပေးနိုင်သည်အထိ လူနာအား သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေသော စက်များပေါ်လာပြီဖြစ်ပါသည်။
Auto CPAP တွင် အချို့ပိုမိုကောင်းမွန်သော စက်များတွင် လူနာများ အသက်ရှူရာတွင် အာမခြောက်စေရန် Humidifier ဟုခေါ်သော လေတွင် ရေငွေ့များ ပါဝင်စေခြင်းဖြင့် အသက်ရှူရာတွင် သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေပြီး နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်စေပါသည်။ ထို့အပြင် စက်တပ်ခြင်းဖြင့် ယခင်ဟောက်သောသူများပင် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပွင့်သွားသော ကြောင့် ဟောက်ခြင်းလုံးဝ မဖြစ်စေတော့ပဲ အခြားမိသားစုဝင်များပါ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်စေပါသည်။
OSA သည် အလွန်အန္တရာယ်များသော နှလုံးသွေးကြောပိတ်ခြင်း၊ နှလုံး ခုန်မမှန်ခြင်း၊ သွေးတိုးဖြစ်စေခြင်း၊ လေဖြတ်စေခြင်း အစရှိသော နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများစွာဖြစ်စေသော ကြောင့် OSA ရှိပါက Sleep Study ပြုလုပ်ပြီး မိမိ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့ ခြင်းအား တိုင်းတာသင့်ပြီး ကုသမှု ခံယူသင့်ပါသည်။ ကုသမှု ခံယူခြင်းသည် လည်း စက်ကလေး တပ်ရုံဖြင့် ကုသနိုင်သောကြောင့် ဟောက်ခြင်း၊ အသက်ရှူရပ်ခြင်းများ ရှိသော မိဘပြည်သူများအနေဖြင့် Sleep Study ပြုလုပ်ပြီး ကုသမှု လိုအပ်ပါက စောလျင်စွာ ကုသမှု ခံယူသင့်ပါသည်။
Family Doctor အထူးကုဆေးခန်းတွင် ဟောက်သော၊ အိပ်နေစဉ် အသက်ရှူရပ်ခြင်း ရှိသော လူနာများအတွက် Sleep Study အား ဈေးနှုန်းအထူးသက်သာစွာဖြင့် ပြုလုပ်ပေးနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ Sleep Study ပြုလုပ်လိုပါက Family Doctor အထူးကုဆေးခန်း ဖုန်းနံပါတ် 09-447164575, 09-954405404, 01-2314146 သို့ ဖုန်းဆက် Booking ယူပြီး Sleep Study အား ငွေကျပ် ၂၅၀၀၀ ဖြင့် ဈေးနှုန်းသက်သာစွာ ပြုလုပ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ ပြုလုပ်မည့် မိဘပြည်သူများအနေဖြင့် Family Doctor အထူးကုဆေးခန်း ဖုန်းနံပါတ် 09-447164575, 09-954405404, 01-2314146 သို့ ဖုန်းဆက် ပြီး ကြိုတင် Booking ယူနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
Special Whole Body Package တွင် ထည့်သွင်း ပြုလုပ်လိုပါက Sleep Study အား ပိုမိုသက်သာသော ဈေးနှုန်းဖြင့် ၁၅၀၀၀ ကျပ် ထပ်မံပေးရုံဖြင့် ထည့်သွင်း ပြုလုပ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
Auto CPAP တပ်၍ ကုသရန် လိုအပ်သော မိဘပြည်သူများအနေဖြင့် လည်း Auto CPAP စက်အား ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ ဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ Auto CPAP စက်များတွင်လည်း လူနာများ အသက်ရှူရာတွင် အာမခြောက်စေရန် Humidifier ပါဝင်ပြီးသား ဖြစ်သည့်အတွက် အသက်ရှူရာတွင် အလွန်သက်တောင့် သက်သာရှိစေပါသည်။ Warranty မှာ2years ဖြစ်ပါသည်။
အေးချမ်းသော ညလေးမှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်နေခြင်းသည် အကောင်းမွန်ဆုံး သော အရသာ တစ်ခုပါ။ OSA (Obstructive Sleep Apnoea) ကြောင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မပျော်နိုင် ဖြစ်နေခြင်းသည် အေးချမ်းခြင်း၏ စစ်မှန်ခြင်း အရသာ ကို မခံစားဖူးသော သူများပင်ဖြစ်ပါသည်။
Source ; Family Doctor Specialist Clinic
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 10:33 AM No comments:
Labels: ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ ဆိုင်ရာ များ
၀ါးခယ်မ ရဲ. ၁၃၈၁ နှစ်ဦးရက် နှင့် သကျမဟာသီရိဘုရားကြီး ရေသွန်းပွဲ
ဘုရားကြီး ၁၀၄ ကြိမ်မြောက်ရေသွန်းလောင်းပူဇော်ပွဲ
၀ါးခယ်မမြို.နယ် သကျမဟာသီ၇ိဘုရားကြီး အာရုဏ်တော်ခံ ၀တ်အသင်း၏ ၁၀၄ကြိမ်မြောက် ရေသွန်းပွဲတော် ကို ယနေ. ၁၃၈၁ ခုနှစ် မြန်မာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ.မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ကျင်းပခဲ့ရာ မြို.သူ/မြို.သားများ ၊ နယ်သူ/နယ်သားများ ပါဝင်ကုသိုလ်ယူဆင်နွဲခဲ့ကြပါသည် ။
ယခင်နှစ်များကဲ့သို.ပင် မီးသတ်တပ်ဖွဲ.က မင်္ဂလာဝင်းထောင့်အထိ ရေတင်ပေးခဲ့ပြီး ရေသယ်ကုသိုလ်ယူ လိုသူများက ထိုနေရာမှ ဘုရားကြီးအထိ စည်ကားစွာ သယ်ဆောင်ကြပါသည် ။ ယခုနှစ်တွင် မြို.ပေါ်ရှိ လူငယ်များ ပိုမိုပါဝင်လာခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် စတုဒီသာလှုဒါန်းမှုများတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြောင်းတွေ.ရပါသည် ။ အဓိကအားဖြင့်အချိုရည် ဒါနပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည် ။
ယခင်ဓလေ့များအတိုင်းပင် ရေသယ်သူများစောင်းတန်းအတွင်းရောက်ရှိချိန်တွင် အမွှေးနံ.သာ လှုဒါန်းသူများက ရေသယ်ဆောင်လာသူများ၏ ရေများထဲသို. အမွှေ။.နံ.သာများ ထည့်သွင်းလှုဒါန်းပေးခဲ့ကြပါသည် ။
ရာသီဥတုပူပြင်းသော်လည်း လူအများအပြား ယခင်အတိုင်းပါဝင်ဆင်နွဲခဲ့ကြပါသည် ။ ရှေးကာလကမူ သကျမဟာသီရိဆင်းတုတော်ကြီးကို ရေသွန်းလောင်းပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းကာလများတွင် ဆင်းတုတော်ကြီးရေရှည်ကြံ့ခိုင်မှုအတွက် ခွင့်မပြုတော့ပဲ သီးခြားဆင်းတုတော် တစ်ဆူကိုသာ ရေသွန်းလောင်းပူဇော်ခွင့်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
ဤဘုရားရေသပါယ်ပွဲသည် လမ်းလျှောက်သင်္ကြန်အားလုံး၏ အဦးအစဟုပြောလျှင်ရသလို အပျော်သက်သက်သာမဟုတ်ပဲ ကုသိုလ်ရေးပါ ပူးတွဲပါဝင်သော အဘိုးတန် ပွဲတော်တစ်ခု ၊ အစဉ်အလာကြီးသော ပွဲတော် တစ်ခု ဖြစ်ပါသည် ။
မြို.လေးရဲ. မြန်မာ့နှစ်သစ်ဦး ရက်များကတော့ ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေနဲ. ပြည့်နှက်နေခဲ့ပါတယ်
ကျေးရွာအလိုက် ၊ ရပ်ကွက်အလိုက် ၊ ဌာနအလိုက် ၊ လမ်းအလိုက် ပြုလုပ်တဲ့ ပရိတ် ၊ ပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်ပွဲတွေ ၊ မြို.ပတ်လည် ကို ကုန်လမ်း ၊ ရေလမ်းကနေ ဆရာတော်ကြီးများက အန္တရာယ်ကင်း ရွတ်ဖတ်မှုတွေ နဲ. တစ်မြို.လုံး ဖုံးလွှမ်းနေပါတယ် ။
နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ.မနက်ကလည်း သာသနာ.မာမကဆွမ်းလောင်းအသင်းစီစဉ်ပေးမှုနဲ. အလှုရှင်တွေရဲ. အာရုဏ်ဆွမ်းလောင်းပွဲကျင်းပခဲ့သလို နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ. ထုံးစံအတိုင်း ရေသွန်းပွဲတော်ကျင်းပခဲ့သလို မြို.ပေါ်ကျောင်း ၇၅ကျောင်ိးကသံဃာကုန်ကို ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းခဲ့ကြပါတယ် ။ ကျုံမေငးမြို.မှာလည်းပဲ အဲ့ဒီနေ.က ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ငါးလွှတ်ပွဲ ၊ မြို.နယ်အဆင့်သက်ကြီး ပူဇော်ပွဲများလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။
မြို.ကနေပြန်မယ့်သူတွေ ပြန်လည်ထွက်ခွာကြပြီမို. ဇက်ဆိပ် ၊ ကားဂိတ်တွေမှာလည်း လူတွေနဲ.ပြန်လည်စည်ကားနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် ။
နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ. ဘုရားကြီး ရေသွန်းပွဲ ပုံများ
မျြိ.လေး၏ ၁၃၈၁ မြန်မာ.နှစ်သစ်ဦး ရက်များ
ရွှေခယ်သင်္ကြန်ကိုတစ်ရက်တိုးစေခဲ့ကြသူများ - မြင့်သန်းဦး ( ၀ါးခယ်မ )
နှစ်ဆန်းတစ်ရက်ဘုရားရေသပ္ပါယ်ပွဲ(သို.) ၀ါးခယ်မရဲ.လမ်းလျှောက်သင်္ကြန် ၁၃၇၉-၈၀
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 10:19 AM No comments:
Labels: မြို.လေးရဲ. ဓလေ.နှင်. ပွဲတော်များ
၁၃၈၀ ( ၂၀၁၉ ) ခုနှစ် ၀ါးခယ်မသင်္ကြန် ရက်များ
သင်္ကြန်အကြိုနေ. မနက်ပိုင်းက ၀ါးခယ်မမြို.နယ် မဟာသင်္ကြန် ဗဟိုမဏ္ဍပ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့ပါသည် ။
အခမ်းအနားကျင်းပရာတွင် အခမ်းအနား စတင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း ၊ မြို.နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှုး မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် မှ နှစ်သစ်မင်္ဂလာစကားပြောကြားခြင်း ၊ ဒုံးယိမ်းအဖွဲ.မှဖျော်ဖြေခြင်း ၊ မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်အား မြို.နယ်ထွေ/အုပ်ဦးစီးမှုး ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် - မြို.နယ် လ၀က ဦးစီးမှုး - မြို.နယ် စည်ပင်အမှုဆောင်အရာရှိ - NLD မြို.နယ် ဥက္ကဋ္ဌ တို.မှဖဲကြိုးဖြတ် ဖွင့်လှစ်ခြင်း ၊ ဒုံးယိမ်းအဖွဲ. တက်ရောက်လာသော အဖွဲ.များမှ မြနန္ဒာ အကဖြင့်ဖျော်ဖြေခြင်း ၊ အခမ်းအနားပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာခြင်းတို.ဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည် ။
၀ါးခယ်မရဲ. သင်္ကြန်အကျကတော့ သူ.ဓလေ့အတိုင်းသူ ဆင်နွဲခဲ့ကြပါတယ် ။
ကမ်းနားလမ်းမှာ ကျင်းပနေတဲ့ လမ်းလျှောက်သင်္ကြန်ပွဲဆင်နွဲကြသူတွေရှိသလို စတုဒီသာကျွေးမွေးလှုဒါန်းသူတွေ ၊ သကျမဟာသီရိ ဘုရားကြီးအတွင်း သန်.ရှင်းရေးပြုလုပ်ကုသိုလ်ယူသူတွေ ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အားထုတ်သူတွေ စသည်ဖြင့် သင်္ကြန်ရဲ. အနှစ်သာရအားလုံး ပြည့်စုံနေအောင် ရှိနေခဲ့ပါတယ် ။
လမ်းလျှောက်သင်္ကြန်တွေနဲ. ပတ်သက်လို.မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ လမ်းလျှောက်သင်္ကြန်ပျံ.သွားတာဟာ မန္တလေးသားတို.အတွက် ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသွားခဲ့ပြီး သူတို.ဆီမှာ ကျင်းပတာ ၄နှစ်ရှိပြီလို.သိရပါတယ် ။
ရန်ကုန်မှာတော့ လမ်းလျှောက်သက်ြန်ကို နေရာ ၁၀ ခုနီးပါးမှာ ကျင်းပနေပြီး မြကျွန်းသာ လမ်းလျှောက်သင်္ကြန်မှာတော့ ပက်တဲ့ရေတွေက ပူနေတာရယ် ၊ QR Code လဲလှယ်တဲ့နေရာ မှာ အဆင်မပြေတာလေးတွေရယ်တော့ ဝေဖန်သံကြားရပါတယ် ။ အင်းလျားလမ်း လမ်းလျှောက်သင်္ကြန်ကတော့ တအားကြပ်နေတာမို. ကလေးတွေကို အများ အကူအညီနဲ. ဆွဲထုတ်ရတာမျိုးတွေ ရှိပြီး လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစီမံဆောင်ရွက်မှုတွေမှာ လိုအပ်ချက်ရှိတယ်လို.ရေးသားမှုအချို.တွေ.ရပါတယ် ။ အရင်သင်္ကြန်ခောတ်တွေမှာတည်းကိုက အဲ့ဒီလမ်းဟာ လမ်းလျှောက်ရာမှာတအားတိုးဝှေ.သွားလာရတဲ့နေရာတွေပါ ။
ပုသိမ်လမ်းလျှောက်သင်္ကြန်နဲ.ပတ်သက်လို. ခင်းကျင်းပြင်ဆင်ထားမှုတွေနဲ.ပတ်သက်လို.လည်းဝေဖန် သံတွေကြားရပြီး ကန်သုံးဆင့်နဲ.တောင်ပေါ်ဘက်မှာတော့ အတော်လေးစည်ကားခဲ့တယ်လို.သိရပါတယ် ။မုံရွာက ကန်သာယာလမ်းလျှောက်သင်္ကြန်ကတော့ ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီး အုန်းလက်မဏ္ဍပ် ၃၀ကျော်ပါဝင်ပြီး စည်ကားခဲ့တယ်လို.သိရပါတယ် ။ မကွေး ကမ်းနားလမ်း လမ်းလျှောက်သင်္ကြန်ကတော့ ဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီး ထူးခြားချက်အနေနဲ. အဘိုးအဘွားတွေပါ ပါဝင်ဆင်နွဲခဲ့တာတွေ.ရပြီး မသန်စွမ်းတွေလည်းပါဝင်ဆင်နွဲခဲ့သလို နံ.သာသွေးမဏ္ဍပ်တွေမှာ အမျိုးသားတွေက သနပ်ခါးသွေးပေးနေပြီး အမျိုးသမီးတွေက ၀င်ရောက်လိမ်းခြယ်နေတာတွေ.ရပါတယ် ။ အဲ့ဒီလိုပဲ ပုဂံလမ်းလျှောက်သင်္ကြန်ကတော့ ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားသားအများအပြား ၀င်ရောက်ဆင်နွဲခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ် ။
ဒီနှစ်မှာပထမဆုံးကျင်းပတဲ့ အင်းလေးရေပေါ်သင်္ကြန်ဟာ ထူးခြားခဲ့သလို စက်ဘီးစီးသမား ၄၀၀ကျော်ပါဝင်တဲ့စက်ဘီးသင်္ကြန်ကိုလည်းအင်းလေးဒေသကနေစတာထွက်ခဲ့ကြတယ်လို.သိရပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ရန်ကုန် ၊ မန္တလေးစတဲ့မြို.ကြီးတွေမှာ ( ပြည်ထောင်စုသင်္ကြန် ) တိုင်းရင်းသားရိုးရာသင်္ကြန်တွေ ကျင်းပပေးနေသလို သုဝဏ္ဏကွင်းမှာ ကျင်းပနေကျ ရခိုင်ရိုးရာသင်္ကြန်ကိုတော့ နေပြည်တော်မှာ ရခိုင်ရိုးရာသင်္ကြန် မဏ္ဍပ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ပေးထားခဲ့တယ်လို.သိရပါတယ် ။
ယိုးဒယားတို.ရဲ.ဆောင်ခရမ် ရေသဘင်မှာတော့ ၂ရက်အတွင်း ယဉ်တိုက်မှု တစ်ထောင်ခန်.အတွင်းမှာ သေဆုံးသူ ၁၀၀ ကျော်ရှိခဲ့ပြီး ယဉ်တိုက်မှုကြောင့် လူသေခဲ့ရင် တရားစွဲတဲ့ ပုဒ်မ ဟာ သေဒါဏ်အထိ ချမှတ်နိုင်တယ်လို.ဆိုပါတယ် ။
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ်ဋ္ဌာန ကို အကြိုနေ.က လူနာ စုစုပေါင်း ၁၄၅ ယောက်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး မန္တလေး ဆေးရုံကြီးကိုတော့ လူနာ ၆၀ကျော်ရောက်ရှိခဲ့ကာ သေဆုံးသူ ၃ ဦး ရှိခဲ့တယ်လို.သိရပါတယ် ။ ဒီနေ. အကျနေ.မှာတော့ မန္တလေး ကျုံးအတွင်းကို စိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသူတစ်ဦး ခုန်ဆင်းသတ်သေခဲ့တယ်လို.သိရပါတယ် ။
၀ါးခယ်မမှာတော့ ဆိုင်ကယ်မတော်တဆမှု အချို. ရှိခဲ့ပြီး သီတာလမ်းနားမှာ ဖြစ်တဲ့ ဆိုင်ကယ်ချင်းမတော်တဆမှု မှာတော့ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရမှုပြင်းထန်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကို ဒီညနေပိုင်းမှာ လွှဲပြောင်းပေးပို. ကုသစေခဲ့ရတာမျိုးအထိရှိခဲ့တယ်လို.သိရပါတယ် ။
နွေရာသီရဲ. မကောင်းတဲ့မိတ်ဖက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မီးဘေးအနေနဲ.အကြိုနေ.က ထိန်ပင်အမှိုက်ပုံ မီးလောင်ခဲ့ပြီး တစ်နာရီမပြည့်ခင်မှာပဲ ငြိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီနေ.ညနေ ၃နာ၇ီခန်.မှာတော့ နေပြည်တော် ဇေယျာသီရိ ကုန်တိုက် မီးဘေးသင့်ခဲ့ပြီး ကုန်တိုက်တစ်ခြမ်းခန်. ပါသွားကာ တစ်နာရီခန်.အကြာမှာတော့ မီးငြိမ်းသွား ခဲ့တယ်လို.သိရပါတယ် ။
သင်္ကြန်အကြတ်နေ.မှာတော့ ၀ါးခယ်မမြို.လေးရဲ. သင်္ကြန်ဟာ ပိုမိုစည်ကားခဲ့ပါတယ် ။ ကျောက်တိုင်ရှေ. ဖျော်ဖြေရေးမဏ္ဍပ် နဲ. သူ.၀န်းကျင်က ရေပက်မဏ္ဍပ်တွေမှာ လူစည်ကားခဲ့သလို ကမ်းနားလမ်း လမ်းလျှောက်သင်္ကြန်ဧရိယာ နဲ. ဗဟိုမဏ္ဍပ်တို.မှာလည်းစည်ကားခဲ့ပါတယ် ။ ဒီနေ.မှာတော့ ပြောရလောက်တဲ့မတော်တဆမှု နဲ.ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုမျိုး မရှိခဲ့ဖူးလို.သိရပါတယ် ။ မြို.လေးရဲ.ပတ်ဝန်းကျင် ကျေးလက်ဒေသကပါ လာရောက်လည်ပတ်ကြပြီး ဒီနှစ်သင်္ကြန်စတိုင်ကတော့ မျက်နှာဖုံးတွေစွပ်တာ ၊ Mask တွေတပ်တာလိုမျိုးကို မိန်းကလေး ၊ ယောင်္ကျားလေးမရွေးတွေ.ရတာပါပဲ ။
မနက်ပိုင်းက လမ်းလျှောက်သင်္ကြန်ဧရိယာအတွင်း ရဲစခန်းရှေ.မှာ သီးစုံဟင်း၊ ဘဲဥ ချဉ်ရေ၊ ငံပြာရည်ကြော်၊ ငါးကြော်နဲ့ ၀ါးခယ်မစခန်းက စတုဒိသာ ကျွေူးမွေးကုသိုလ်ယူခဲ့ကြတယ်လို.သိရပါတယ် ။
ဒီနေ.ထူးခြားတာကတော့ ကသာလမ်းလျှောက်သင်္ကြန်မှာ လေတိုက်မိုးရွာပြီးပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို.သိရပါတယ် ။
သဘာဝကြောင့်မဟုတ်ပဲ စည်းကမ်းမဲ့တဲ့သူတွေကြောင့် ရန်ကုန် လမ်းလျှောက်သင်္ကြန် မှာ အလှဆင်ထားတဲ့ပုသိမ်ထီးတွေ ပျက်စီးခဲ့ရတာ စိတ်ပျက်စရာပါပဲ ။ အလှဆင်ထားတဲ့ထီးတွေတက်ဖြုတ် ၊ ယူဆောင်း ၊ ဓါတ်ပုံတွေရိုက် ၊ Facebook တင်ကြတဲ့လူငယ်တွေ ( အချို.ဆိုပညာတတ်ဖြစ်ပုံရသူတွေ ) ရဲ. စိတ်ဓါတ်ဟာ အင်မတန် မှကို အံ့သြဘွယ်ရာ ၊ မသတီစရာပါပဲ ။
ဒါကို ( နယ်မှာမွေး
ပညာရေးက ဆုံးခန်းမတိုင်(ဆုံးခန်းတိုင်ခဲ့ရင်လည်း ပညာက မတတ်)
ပညာကောင်းကောင်းမတတ်တော့ အလုပ်အကိုင်က ကောင်းကောင်းမရ ..
ဝင်ငွေနည်းတော့ မိဘ အုပ်ထိမ်းသူ ဆိုဆုံးမမယ့်သူတွေနဲ့ အတူနေခွင့်မရှိတော့ပဲ ရန်ကုန်ကို လာအခြေချ
တွေ့ကရာ ရရာအလုပ် လုပ်ကြ ..
ကိုယ်ခန္တာကြံ့ခိုင်ဝဖြိုးသန်စွမ်းဖို့တောင် အနိုင်နိုင် ရှာဖွေနေကြရတာမို့ စိတ်ဓာတ်သန်စွမ်းဖို့ ဘာမှမလုပ်နိုင် (စာမဖတ်ပဲ ဖုန်းပွတ်၊ ချတ်တင်လုပ်၊ အတင်းအဖျင်းပဲဖတ်)
အလကားရလို့ကတော့ ဘာဖြစ်ဖြစ် အကုန်ယူမယ် ရှက်စရာမလိုဘူး ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ တန်ဖိုးမရှိတဲ့ လူ့အန္တတွေ ပေါသထက်ပေါလာနေတဲ့ မြို့တော်ရန်ကုန် ဖြစ်လာပါတော့တယ် ..) ဆိုပြီး ထီးတွေယူပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ကြသူတွေနဲ.တွဲပြီး ဒါဟာရန်ကုန်မှာ လာနေတဲ့ အခြားဒေသကလူတွေလက်ချက်လိုလို.ရေးခဲ့တဲ့ https://www.facebook.com/myanmar.e.e.team Page ဟာလည်း အများသူငှာ ဆဲသံသာတို.နဲ.မြိုင်ဆိုင်နေခဲ့ပါတယ် ။
သကြန် အကြိုနေ. နဲ.အကျမနက်ပိုင်း ၅နာရီအထိ ရန်ကုန် - မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး မှာ ယာဉ်မတော်တဆမှု ၈ မှု ၊ဒါဏ်ရာရသူ ၂၀ ရှိခဲ့တယ်လို.သိရပါတယ် ။
ယိုးဒယးရဲ.ဆောင်ခရမ် ရေသဘင်မှာတော့ ဧပြီ ၁၁ ကနေ ၁၃ အတွင်း ယာဉ်မတော်တဆမှု ၁၆၆၅ ၊ သေဆုံးသူ ၁၇၄ ၊ ဒါဏ်ရာရ ၁၇၂၈ ရှိခဲ့တယ်လို.သိရပါတယ် ။
အားလုံးဂရုပြု သတိထားသင့်တဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလည်း ဒီမနက်ပိုင်းက မုံရွာမြို. ၊ချင်းတွင်းမြစ်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ် ။ မုံရွာဘက်ကမ်းကနေ ညောင်ပင်ကြီးဇက်ဆိပ်ကိုကူးတဲ့ ကူတို.စက်လှေဟာ လူ၄၀ကိုတင်ဆောင်လာခဲ့ပြီး အကူးမှာ လှေဝမ်းထဲရေ၀င်နစ်မြုပ်ခဲ့တာကြောင့် မီးသတ်ကယ်ဆယ်ရေးရေယာဉ် ၄စီး ၊အရပ်ဘက်ကယ်ဆယ်ရေး ၃စီးကူညီခဲ့တာကြောင့် တစ်ဦးသာရေနစ်သေဆုံးခဲ့ပါတယ် ။
ဒါဟာမြို.လေးအတွက်လည်းအထူးသတိထားရမယ့်အဖြစ်ပါ ။ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ.ကစပြီး ဒေသအသီးသီးကနေ ၀ါးခယ်မကို ပြန်ရောက်နေသူတွေပြန်ကြတော့မှာပါ ။ အဲ့ဒီမှာဇက်ကိစ္စတွေ ၊ ကူတို.ကိစ္စတွေ အဆင်ပြေဖို. ၊ လုံခြုံစိတ်ချရဖို. ၊ စည်းစနစ်ကျဖို. တာဝန်ရှိသူတွေရော ၊ ပြည်သူတွေပါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရမှာပါ ။ တံတားဖျက်တဲ့ကိစ္စ ၊ ဇက်ဆွဲတဲ့ကိစ္စအပါအ၀င် ကိစ္စတော်တော်များများ မှာ ဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်အားလုံးလည်းပိုဂရုစိုက်ကြမယ်လို.ယုံကြည်ပါတယ် ။ ခုချိန်မှာ ပြည်သူလူထု ယုံကြည်နေတာက အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ် ဆိုတာမျိုး ၊ အမည်ခံအခွင့်အရေးယူသူမျိုး တွေမရှိတော့တဲ့ခောတ် ဒါ့ကြောင့်အားလုံးတစ်ပြေးညီ စီနီယာအတိုင်းသာ ဇက်အတင်အချကအစ စည်းကမ်းအတိုင်းသာ ဖြစ်စေဖို.မျှော်လင့်နေကြပြီး အရေးပေါ်အခြေအနေကြုံတွေ.နေရသူ ( ဥပမာအရေးပေါ်လူနာ ) ဆိုတာမျိုးအတွက်သာ အခွင့်အရေး စိတ်တူသဘောတူပေးချင်ကြပါတယ် ။ သင်္ကြန်တွင်းတာဝန်ယူပေးနေရသူအားလုံးကို ကိုယ်ချင်းစာသလို အောက်ခြေက အပြုအမူနဲ.ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ ဟိုးအထက်အဆင့်ဆင့်အထိ ရိုက်ခတ်တတ်တာမို. မလိုလားအပ်တာမျိုးလည်းမဖြစ်စေချင်တဲ့စေတနာသက်သက်ပါ ။
မြို.လေးရဲ. သင်္ကြန်အတက်နေ.ဟာလည်း စည်စည်ကားကား အေးအေးချမ်းချမ်း ပြီးဆုံးခဲ့တယ်လို.ဆိုရပါမယ် ။ လူငယ်ချင်းအနည်းငယ်သော အချင်းများမှု အချို. ရှိခဲ့ပေမယ့် ပြောရလောက်အောင်ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရ ခဲ့တာမျိုးအထိတော့ မရှိခဲ့ဘူးလို.သိရပါတယ် ။ ဒါ့အပြင်မတော်တဆမှုလည်း ထိခိုက်မှု ရှိတယ်လို.မကြားရပဲ ညနေပိုင်းမှာသာ ကျုံမငေးကနေ ၀ါးခယ်မဆေးရုံရောက်လာတဲ့ မတော်တဆမှု လူနာတစ်ဦး ရန်ကုန်ကို လွှဲပို.ခဲ့ရတာ ရှိပါတယ် ။
မြို.လေးရဲ. ဒီနှစ်သင်္ကြန်ဟာတော့ မတော်မဆ နဲ.ရန်ပွဲများကြောင့် ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရမှု အနည်းဆုံး နှစ်လို.ပြောလို.ရပါတယ် ။ ဒီနှစ်မှာ သိသိသာသာလျော့နည်းသွားတာကတော့ စတုဒီသာမဏ္ဍပ်တွေဖြစ်ပြီး ရပ်ကွက်အလိုက်လုပ်ကြတဲ့ မဏ္ဍပ်တွေလည်း ဒီနှစ်လျော့နည်းသွားပါတယ် ။ မြို.ပေါ်မှာ ဆိုင်ကယ်ကို ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်းမောင်းတာမျိုးတွေလည်း သိသိသာသာလျော့နည်းသွားပြီး မိသားစုလိုက် လမ်းလျှောက်သင်္ကြန်ကို ၀င်ရောက်ဆင်နွဲကြတာတော့ ပိုများလာတယ်ပြောရပါမယ် ။
ဖျော်ဖြေရေးမဏ္ဍပ်အနေနဲ.ကတော့ ကမ်းနားလမ်း လမ်းလျှောက်သင်္ကြန် ကမဏ္ဍပ် ၊ ကျောက်တိုင်ရှေ.က ရွှေအိမ်စည်မိသားစုဖျော်ဖြေရေးမဏ္ဍပ် ၊ သံကြိုးတိုင် မြစ်ကြီးနား ရွှေစည်းစိမ်ဖျော်ဖြေရေးမဏ္ဍပ်ဆိုပြီး ၃ခုရှိခဲ့ပါတယ် ။ ညပိုင်းဖျော်ဖြေရေးမဏ္ဍပ် ၊ စင်မြင့်စတာတွေတော့ ဒီနှစ်မရှိခဲ့ပါဘူး ။
ဒီနေ.သင်္ကြန်အတက်နေ.မနက် ၀ါးခယ်မရဲ.လမ်းလျှောက်သင်္ကြန်မှာ ထူးခြားတဲ့အလှုတစ်ခု ရှိခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒါကတော့ အိုးမည်း အလှုပါ ။
လူတစ်ယောက်က အိုးမည်းတွေပေနေတဲ့ ဒယ်အိုးတစ်လုံးကိုကျောမှာပိုးပြီး အဲ့ဒီနေရာမှာ ပတ်လျှောက်နေတာပါ ။ လူတွေက သူကျောပိုးထားတဲ့ ဒယ်အိုးက အိုးမည်းတွေ ယူလိုက် ၊ အခြားသူတွေ လိုက်သုတ်လိုက်နဲ. သူ.ဒယ်အိုးလေးပြောင်သွားတဲ့အထိ ၀ိုင်းအားပေးလိုက်ကြပါတယ် ။ ( ပုံကတော့ပျက်သွားတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးထဲပါသွားတာမို. ပြ မရပါဘူး )
ဒီသင်္ကြန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ထူးခြားတဲ့အမှု ၂ခုကြားခဲ့ရပြီး တစ်ခုကတော့ အုတ်တွင်းမြို.နယ် သရက်ချဉ်ကျေးရွာမှာ သင်္ကြန်အကျနေ.က ဖြစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ၁၅ နှစ်အရွယ်သမီးငယ်ကိုရေထွက်ိကစားလို.ဆိုပြီး အဖေကရိုက်တာမှာနောက်စိကို ထိပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ရတာပါ ။ နောက်တစ်မှုကတော့ ကျိုင်းတုံမြို.နယ် ယန်းလောကျေးရွာမှာ သင်္ကြန်အကြတ်နေ.က ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အိမ်ရှင်ကနေ အိမ်ငှားဆီကဆိုင်ကယ်ကို သင်္ကြန်လည်ဖို.ငှားတာ မရလို.အခန်းကိုမီးနဲ.ရှို.တဲ့အမှုပါ ။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာတော့ သင်္ကြန်ကာလ ၃ ရက်အတွင်း ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှု၊ ယာဉ်တိုက်မှုနှင့် သေမှု သေခင်းဖြစ်စဉ်များအရ လူ ၂၃ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး ၃၁၆ ဦးအထိ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို.သိရပါတယ် ။
မအူပင်မြို့ ၊ ပေါ်တော်မူပိုက်တန်း မြစ်ကမ်းစပ်၌ ၁၂ရပ်ကွက် ၊ မြိုသစ် ၅လမ်းတွင် နေထိုင်ကြသည့် ဆယ်ကျော်သက် အရွယ် လူငယ် ၃ဦး ရေဆင်းကူးရာမှ မိန်းကလေး ၁ဦးနှင့် ယောကျေ်ားလေး ၁ဦးတို့ ရေနစ် ပျောက်ဆုံးခဲ့တယ်လို.သိရပါတယ် ။
ဒီနေ.ယာဉ်မတော်တဆမှု ထဲမှာတော့ ရန်ကုန် - မရမ်းကုန်း ၊ ၉မိုင် မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်မှာ ကားတစ်စီးက အရှိန်လွန်ပြီး လမ်းဘေးပလေက်ဖောင်းမှာရေပက်ကစားနေတဲ့ကလေးအုပ်ကိုဝင်တိုက်မိခဲ့ပြီး ကလေး ၇ယောက်လောက် ဒါဏ်ရာ ရခဲ့တယ်လို.သိရပါတယ် ။ အများစုကတော့ဒါဏ်ရာပြောပလောက်အောင်မရပဲ အချို.သာ ဒါဏ်ရာ အနည်းငယ်ပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို.သိရပါတယ် ။
မြန်မာ့သင်္ကြန် ကို မြန်မာအများစုရှိတဲ့နေရာတွေမှာ ကျင်းပနေကြဖြစ်ပြီး ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ နယူးထိုင်ပေမြို. ကျုံးဟိုမြို.နယ် က မြန်မာတန်းမှာ ဒီနှစ်ကျင်းပတဲ့ သင်္ကြန်ဟာဆိုရင် ၂၁နှစ် ရှိသွားပါပြီ ။ ဒီပွဲကိုမြန်မာတွေ ၊ မြန်မာပြန် တရုတ်တွေ ၊ ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေ ပျော်ရွှင်စွာ ပူးပေါင်းကျင်းပခဲ့ကြတယ်လို.သိရပါတယ် ။မြန်မာ့စားစရာတွေအပြင် ရုပ်သေးဖျော်ဖြေပွဲကအစ အပြည့်အစုံ ကျင်းပကြတာပါ ။
ဒါနဲ.ဆန်.ကျင်ဘက်ကြားရတဲ့သတင်းကတော့ မလေးရှားနိုင်ငံက မေတ္တာဝိဟာရကျောင်းမှာ ကျင်းပတဲ့ မြန်မာသင်္ကြန်ပွဲဟာတော့ တားမြစ်ခံရတဲ့အပြင် ကျောင်းပါချိတ်ပိတ်ခံခဲ့ရတယ်လို.သိရပါတယ် ။
ဒီသတင်းကို RFA မှာ ခုလိုရေးသားထားပါတယ် ။
မလေးရှားနိုင်ငံ စလန်းကောပြည်နယ် ကာချမ်းမြို့က မေတ္တာဝိဟာရ ကျောင်းတိုက်မှာ ဧပြီ ၁၄ ရက်နေ့ သင်္ကြန်အကျနေ့က ခွင့်ပြုချက်မယူဘဲ သင်္ကြန်ပွဲ ကျင်းပခဲ့တာကြောင့် ကျောင်းတိုက်ကို မလေးရှား စည်ပင်ရဲတပ်ဖွဲ့က မနေ့က ချိတ်ပိတ်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မေတ္တာဝိဟာရ ကျောင်းတိုက်က ဦးဆောင်ပြီး နယ်မြေလုံခြုံရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ နားလည်မှုယူကာ ခွင့်ပြုချက်မတင်ဘဲ သင်္ကြန်ပွဲကို ကျင်းပခဲ့တာကြောင့် ပွဲကျင်းပနေချိန်မှာ ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ရောက်ရှိလာပြီး ပွဲကို ဆက်လက်မကျင်းပဖို့ ညွှန်ကြားခဲ့ပြီး နောက်ရက်မှာ ကျောင်းတိုက်ကို ချိတ်ပိတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း မလေးရှားအခြေစိုက် ကပုန်း ၇ ရက်သားသမီးများ နာရေးကူညီမှုအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆန်းဝင်းက RFA ကိုပြောပါတယ်။
ဘာသာရေးဖြစ်စေ မည်သည့်အရာဖြစ်စေ အခြားနိုင်ငံတွေမှာ သူတို.ဥပဒေးအရသာ ပြတ်သားစွာ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်လေ့ရှိကြောင်း ဒီဖြစ်ရပ်က သက်သေပြနေပါတယ်။
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 10:03 AM No comments:
ညအိပ်စဉ် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့ခြင်း နှင့် အသ...
၀ါးခယ်မ ရဲ. ၁၃၈၁ နှစ်ဦးရက် နှင့် သကျမဟာသီရိဘုရာြး...
အလည် တစ်ခေါက်လာ ရောက်စေချင် ဝါးခယ်မ မြို့နယ်တစ်ခွင...